एसपी “हेलो ! के छ खबर, कता हो ? यहाँ, तपाईको मान्छेले मलाई हप्कायो...” - Nagarik Bahas
एसपी “हेलो ! के छ खबर, कता हो ? यहाँ, तपाईको मान्छेले मलाई हप्कायो…”
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ समय: ९:१७:५०
उदयपुर । कालो भेष्ट, कालो हाफ पेन्ट, कालो जुत्ता, पहेलो हेलमेट र मास्क लगाएर साईकलिङ्ग गर्दै मदन भण्डारी राजमार्गको असारी तर्फ हिडेका व्यक्तिले अगाडीबाट आउँदै गरेको पल्सर मोटरसाईकललाई भने–‘ए भाई गाडी रोक’
मोटर साईकल चालकले नसुने जसरी अगाडी बढ्न खोजेपछि साईकल चढ्ने व्यक्तिले चिच्याउदै पुनः भने–‘ए भाई गाडी रोक भनेको, सुनेनौ ?’
त्यसपछि मोटरसाईकल रोकियो । साईकलवालाले फेरी प्रश्न ग¥यो –‘निषेधाज्ञामा किन गाडी हाकेको, पास छ ?’
मोटरसाईलवाला पनि के कम, जाबो साईकलवालालाई ढाडस दिदै भन्यो–‘म स्टाप हुँ, के को पास न सास’ यो वादविवाद गत सोमबार विहानी पखको हो ।
साईकलवालाले मोटर साईकलवालाई आफ्नो परिचयपत्र देखाउन आदेश दिए । तर मोटर साईकलवालाले परिचयपत्र देखाउन मानेनन् । त्यती बेलै साईकलबाले गोजीबाट फोन झिकी मोवाईलमा फोन डायल गर्याे ।
उताबाट ‘त्यसलाई पक्रेर राख्नु’ भन्ने आदेश आउँछ । साईकलवालाले फोनमा बोलेका व्यक्ति अरु कोही नभएर रण शाल्दुल गण बोक्सेका गणपति हुन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ २८ गते सम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ तर विहान ९ बजे सम्म अतिआवश्यक बस्तु खरिद गर्न दिएको छुटको समयपछि पनि निषेधाज्ञा उल्लघंन गर्नेको संख्या बढि रहेको छ ।
निषेधज्ञा खुकुलो छ, प्रहरी गफमै व्यस्त हुन्छन् । प्रहरीहरुले आफ्नो चिनेजानेकोलाई सहजै छोड्ने गरेका छन् भने कसै कसैलाई केरकारमा व्यस्त देखिन्छ । निषेधज्ञा खुकुलो भएका कारण अहिले दिन प्रति दिन बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ । न मुखमा माक्स, न पसल पसलमा सेनिटाइजर, न सामाजिक दुरी देखिन्छन् । गत वर्षको तुलनमा यस वर्ष निषेधज्ञाको आदेश कागजमै सिमित भएको छ । डिसिएमसीको बैठकले पेट्रोलिङको लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय कागजमै सिमित रहयो । निषेधज्ञा निमुखालाई मात्रै लागू भए, धनीले भनसुन गरेर छिर्के मिर्के लगाएर आवतजावतमा कुनै अवरोध भएन ।